10 Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe | Save A Train
Home > Njem Iceland > 10 Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe
Train Travel Britain, Train Travel Denmark, Train Travel France, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Inzọ Njem Portugal, Train Travel Scotland, Ingbọ ologo Spain, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe, Njem Iceland
Aja osimiri, echiche ugwu, doro anya mmiri na-acha anụnụ anụnụ, na ịtụnanya sọọfụ obodo, ndị a 1o ọtụtụ The Epic sọfụ ebe Europe bụ zuru okè n'ihi surfers na niile etoju. Site n’oké osimiri Italiantali ruo Denmark, na Portugal, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Osimiri Godrevy, England
Mgbe oge ruru, ị pụrụ nọkwasị ụfọdụ The Epic ogologo mgbidi lefts na ikike ebe a. Ee, Osimiri Godrevy n'akụkụ Atlantic bụ otu n'ime ebe kachasị mma na-egwu egwu na Europe. Emi odude ke Cornwell, otu n’ime ndị kasị maa mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe, osimiri a bụ ọkacha mmasị kachasị na sọfụ obodo.
Osimiri Godrevy bụ akụkụ nke St Ives Bay, na ọkọchị, ị ga-ahụ ebe a ọtụtụ ndị bi na ha n'oge okpomọkụ ememe. Ukwuu n'ime sunbathing, na-ewu ụlọ na anyanwụ, ma ọ bụ nwee mmasị n'ụlọ ọkụ, n'amaghị na Godrevy na-enye ụfọdụ n'ime ọfụma kachasị mma na Europe.
Mgbe ole: spring, Eprel maka ebili mmiri dị ọcha.
2. Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe: Peniche Portugal
Otu awa si ọdụ ụgbọ elu Lisbon, nke abụọ kasị The Epic surf ebe na Europe na-eche gị na Portugal. Peniche bụ peninshula n'ụsọ osimiri Portugal, nke na -emepụta nnukwu ọnọdụ maka ebili mmiri ebili mmiri n'afọ niile. Ọzọkwa, Osimiri Portugal bụ ụfọdụ n'ime kasị rọrọ nrọ osimiri na Europe.
Oge obi ụtọ na-agbaji, Osisi sandbar, na mgbakwunye na oke osimiri dị ịtụnanya, ka Peniche sọọfụ n’eluigwe. Ọ bụ ezie na Peniche bụ peninshula, e nwere ihe karịrị 30 ebe a na-asọ asọ na mpaghara ya, na ọtụtụ ebe ịgbazite sọọfụ gia. Otu ihe kwesiri iburu n'uche bu na ichoro akwa mmiri n'afọ niile, n'ihi mmiri oyi-mmiri oyi.
Mgbe ole: Septemba ruo Ọktọba
Ebee: Foz do Arelho bụ oke aja dị ịtụnanya na mgbago ugwu Peniche maka ndị mbido na uru, ekele nnweta na ntinye. The-acha anụnụ anụnụ ọkọlọtọ osimiri Supertubos bụ ebe ị ga-agba ịnyịnya ndị kasị ama na Europe, ngwa ngwa na oke iwe. Ya mere, belụsọ ma ị bụ sọftị nwere ahụmahụ, ebili mmiri a ga-agbada gị n’ike.
Efe: 80 cm ka 2.6 m.
3. Bọọlụ, Ireland
Na oke osimiri dị egwu nke ụwa, na pụtara n'elu ugwu echiche na n'ikpere mmiri na-eje ije tinyere, Mpaghara Donegal bụ otu n'ime mpaghara kachasị mma na Ireland. Obodo Bundoran dị na Ireland nwere otu ebe kacha mma na sọfụfụ na Europe maka onye na-eme njem kachasị elu.
Bundoran is home to the most famous waves, ọnụ ọgụgụ kasị elu. Ọnụ kasị elu bụ aka ekpe, gbasie ike ma dị mkpụmkpụ. Ya mere, mgbe ịnyachara igwe zuru oke ị nwere ike ijide pint na ụlọ mmanya obodo, ya na ndi ozo no na mpaghara.
Mgbe ole: Winter.
maka: ndị surfers dị elu.
Efe: o.50 ka 2.7 m.
4. Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe: Klitmoller, Denmark
Atsgbọ mmiri azụ, Ndị surfers, na aja aja nzuko na-arị elu North Oké Osimiri bụ ọnọdụ ị ga-ahụ na Klitmoller. Eku a na ọnọdụ ihu igwe bụ ihe kpatara obere obodo Klitmoller aha “Cold Hawaii”.
Na mgbakwunye na sọọfụ, Klitmoller bụ otu n'ime ebe kachasị mma maka ikuku na-efegharị na Northern Europe. Ya mere, can nwere ike surfers nọkwa na ebili mmiri niile n'afọ gburugburu. Ihe ọzọ dị ịtụnanya gbasara Klitmoller bụ ebe dị nso na ya National park na ya ngosi ihe mgbe ochie, ebe ị nwere ike nweta mmụọ nsọ site na akụkọ Viking, tupu ejide oke ebili mmiri.
Mgbe ole: nile n'afọ.
Gịnị: ọnọdụ ihu igwe zuru oke, maka ndị niile surfers, afọ niile.
Hamburg na Copenhagen Na hagbọ oloko
Jiri ụgbọ oloko na Zurich gaa Hamburg
Rotterdam na Hamburg Na ụgbọ oloko
Osimiri ndị dị na Biarritz bụ ụfọdụ n’ime osimiri kachasị atụ ụjọ na France, hapụ Europe. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na Biarritz bụ akụkọ amaala sọfụfụ na Europe. Mmiri La Graviere na-adọta ndị surfers si n'akụkụ ụwa niile na Atlantique Pyrenee n'ọchịchọ ahụ mgbe ebili mmiri zuru oke.
Ọ bụ ezie na Hossegor na-adọtakarị ndị ọbịa maka ezumike n'akụkụ oke osimiri, na sọfụ obodo ebe a bụ otu nke kasị mma na Europe. Ya mere, ị nwere ike nweta nghọta na zuru okè ife n'elu kọfị na croissants si pro surfers na France. Na mgbakwunye, Hossegor kwadoro kwa afọ WSL njegharị ụwa ihe omume.
maka: surfers na ọkwa niile na ụdị bọọdụ niile.
Gịnị: Oké barreling osimiri ezumike.
Mgbe ole: Mgbụsị akwụkwọ ruo oge opupu ihe ubi, site n’etiti ọnwa Ọktọba obodo ahụ mechiri, ebili mmiri na ebili mmiri rue epic la Grave. Ya mere, ị nwere ike ịhazi njem gị gaa ebe a na-egwu mmiri, ma nọrọ na họtel ma ọ bụ ndị njem mgbazinye n'ụsọ osimiri.
Ogologo ife: 0.5 ka 2.5 m.
6. Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe: Agwaetiti Lewis, Scotland
Ebe ugwu ugwu na-ezute Atlantic, ebili mmiri na oké ifufe, ike kacha The Epic Farisii ahụ na Scotland. Island nke Lewis dị na njikọta ọnụ nke Atlantic Outer Hebridean Islands bụ otu n'ime ihe kachasị ọmarịcha ebe na Scotland.
Ya mere, Isle nke Lewis bụ sọọfụ paradaịs, ma ọ bụ naanị maka ndị kachasị elu surfers. Oké mmiri na ebili mmiri abụghị maka ndị na-amalite ịmalite na ịbanye ntinye na ikike.
Mgbe ole: udu nmiri na udu mmiri.
7. Scheveningen The Hague, Mba netherland
Ikuku ikuku ikuku, Uchechukwu, ma ọ bụ sọọfụ ikike, Hague bụ nnukwu ebe maka ezumike sọfụ, naanị a ụgbọ okporo ígwè njem pụọ na Amsterdam. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ihu igwe na-acha ntụ ntụ ma ghara ịnabata, mana maka ndi surfers, ọ na - emepụta ọnọdụ zuru oke maka ịnya ebili mmiri zuru oke.
Nwere ike ijide nri n'ụzọ niile n'akụkụ osimiri 11-kilomita, karịsịa na osimiri Scheveningen. Ebe a, ị ga-ahụ ndị surfers na ọkwa niile yana ụlọ ahịa na akụrụngwa kachasị mma.
ikwubi, A maara Hague maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya n'ụwa, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị The Epic sọfụ ebe ke Europe.
8. Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe: San Sebastian, Spain
N’ókè France na Spain, na mba Basque, San Sebastian bụ nnukwu obodo dị egwu, ya na epic surfing tụrụ. Ebe a, ị ga na-awụli elu site na ife ka tapas mmanya, ma na-atụrụ ndụ na aja osimiri na otu n'ime ndị kasị mma Spanish obodo.
Cantabria nwere ụfọdụ ịtụnanya osimiri na sọfụ ebe, dị ka osimiri Zurriola, kacha sọọfụ osimiri na San Sebastian. Ọ dị mma maka ndị mbido na ndị na-ahụ maka etiti. Otú ọ dị, maka echiche dị ebube, lelee ebili mmiri na La Concha beach.
Gịnị: ngwa ngwa lefts na-emeghe n'ọnụ mmiri.
Efe: mma Kechie-gburugburu northwest zaa.
Mgbe ole: Nọvemba rue Disemba.
Watergate Bay bụ ebe sọfụ na UK, na otutu narị ndị surfers ndị gara asọmpi sọfụ sọsọ na mba Bekee ga-ekwenye. Windsurfing na sọsọ mmiri na-ewu ewu ebe a, na-eme ka Watergate Bay bụrụ otu n’ime 10 kacha epic sọọfụ ebe ke Europe.
Sennen Cove na Cornwell bụ osimiri ọzọ na-akpali akpali na sọọfụ. Sennen Cove na Praa Sands bụ ebe dị egwu sọfụ nke nwere osimiri dị ịtụnanya.
Gịnị: ifufe na imeghe ya zuru oke maka ndị surfers na ọkwa niile.
10. Ọtụtụ Epic Surf Ebe Na Europe: Sardinia, Italy
Mara mma nke agwaetiti Italy nke Sardinia closes na 10 kacha epic surf ebe na Europe ndepụta, ya na Oke Osimiri Mediterenian na aja aja. Ebe a, ị nwere ike ijide obere ebili mmiri na ọkara, ma ọ bụ ebili mmiri siri ike n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Ọzọkwa, na 300 zuru okè ụbọchị, Sardinia bụ sọọfụ paradaịs.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ nọkwasị epic swells, mgbe ahụ atụmatụ gị sọọfụ ezumike na Sardinia, site na Nọvemba rue Jenụwarị. Costa Verde, Buggero na San Nicolo, na Porto Ferro na Alghero bụ 3 of the beautiful and best beaches for surfing.
Mgbe ole: Septemba rue Nọvemba, ma ọ bụ Machị ruo Mee.
Efe: 3-4 m.
na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere atụmatụ a ịtụnanya Farisii ezumike ka 10 kacha epic sọọfụ ebe ke Europe. A ụgbọ okporo ígwè na-aga na ebe na a dreamy home pụọ n'ụlọ bụ quickest na kasị oké ọnụ ụzọ nke njem.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Ọtụtụ Epic sọfụ njem Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / fr na / es ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
bestsurfingplaceseurope sọfụ surfcampseurope Surfing SurfingDestinations surfingholidayineurope wave